DAAWO: Wararkii u dambeeyey ee Xaaladda Wasiir Janan oo laga deyrinayo & Xogo cusub.
September 2, 2019 NEWS 1
MUQDISHO(P-TIMES) – Dadaalo xoog badan oo ay garwadeen ka yihiin xildhibaano & Siyaasiin ka soo jeeda gobalka Gedo ayaa socda, kuwaas oo ku wajahan in xoriyadiisa uu dib u helo wasiirka Amniga Jubbaland Cabdirashiid Xasan Nuur (Janan) oo ay xirtay dawladda Soomaaliya 31-kii August, ka dib markii sidda ay boolisku sheegeen in lagu haysto dambiyo culus.
Dadaalada ayaa kasoo bilowday xildhibaanada uu kasoo jeeda Janan oo dadaal badan galinaya sidii uu xoriyadiisa u heli lahaa, waxaana xubnahan ay la kulmeen Ra`iisulwasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre.
Warar hoose ayaa sheegaya in uu Raysalwasaaruhu si cad u sheegay in uusan waxba kala socon xariga wasiirka Amniga ee Jubbaland, balse uu maqlay shalay, markii ay warkaas ku wargaliyeen laamaha ammaanka ee dawladda Soomaaliya.
Xog ay heshay Puntlandtimes.com waxay cadeynaysaa in xubno katirsan wasaaradda Amniga iyo laamaha Booliskuba ay sheegeen in uusan gacantooda ku jirin ee uu ku xiran yahay goob-gaar ah oo ay leeyihiin ciidamada Sirdoonka Federaalka.
Tan iyo qabashadii Janan ma jirto cid aragtay sidda aan ku ogaanay xogo kala duwan oo aan ka helnay qaar kamid ah masuuliyiinta Jubbaland iyo eheladiisa oo sheegay in markii u dambeysay ay telfoon ka wada hadleen xubin katirsan xaafiiska Madaxweynaha Federaalka.
Madaxweynaha Soomaaliya oo kasoo laabtay shalay dalka dibadiisa, ayaa lafilayaa in ay maanta kulmaan xildhibaanada ay isku beesha ka soo jeedaan ee gobalka Gedo, oo ay ka wada hadli doonaan arrimaha ku wajahan Xariga wasiirka Amniga ee Jubbaland, waxaana muuqata in ay socdaan dadaalo lagu sii deynayo.
Waa qabiil waxa loo haystaa, sow tii hadakahor la xira ee lasiidaayey, iyada oo wax lagu waayey, hadana hadana lama garanayo waxaloo haysto, waa axmed madoobe ha isdhiio.